के तपाई सुर्ती चुरोट छोड्न चाहनु हुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
अक्टोबर 3, 2019 अक्टोबर 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments चुरोट, सुर्ती
के तपाई सुर्ती चुरोट छोड्न चाहनु हुन्छ ? हाम्रो शरीरलाई खोक्रो बनाउन सक्रिय भुमिका निभाउन सुर्तीजन्य पदार्थको ठूलो हात छ । हामीले समयमा सोच्न सकिएन भने कालन्तरमा गएर यसले थुप्रै समस्या निम्ताउन सक्छ । यस्ता बस्तुबाट बच्नु नै सवैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुने देखिन्छ ।
के तपाईलाई थाहा छ ? हरेक ८ सेकेन्डमा एकजनाको मृत्यू सूर्ती सेवनका कारणले हुने गर्दछ भने हरेक १० जनामध्ये १ जना वयस्कको अकालमा मृत्यू संसारभरी चुरोट सेवनकै कारणले हुने गर्दछ । यस्तै क्रम चलिरहने हो भने सन् २०३० सम्ममा चुरोट सेवनले ६ मध्ये १ जना मान्छेको मृत्यू गराउने विश्वब्यापी तथ्याङ्क पूर्वानुमान गरेको देखिन्छ छ ।
यस्तो वस्तुको सेवन गर्नु कहाँसम्म जायज छ । आजको लेखमा धुम्रपान छोडाउने सरल औषधिको बारेमा जानकारी पाठक सामु पस्कन गइरहेको छ । धुम्रपानले आफुलाई मात्र नभई आफुले फालेको धुवाले सन्तानलाई समेत नोक्सान गर्न सक्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै हामीले धुम्रपान लिने गर्छौं ।
यस्तो कुलतबाट आफुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी प्राप्त गरौं । प्रकृतिले हामीलाई हरेक त्यो बस्तु दिएको जसको प्रयोग सहि तरिकाले गरेमा यो जस्ता अनगिन्ती समस्या हल हुन सक्छ । विगत लामो समयदेखि यस्ता औषधि पस्कदै आएको छु । कौडीको मुल्यमा खरिद गरेर ल्याएको औषधिले बहुमुल्य फाइदा दिन सक्छ ।
यो औषधिले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनपछि स्वास गनाउने जस्ता समस्या देखिन सक्छ । मुखको छालामा प्रतिक्रिया देखाउन सक्छ । यो औषधिले मुख कुल्ला गर्दा दुर्गन्ध समेत हटाएर आफुलाई सुरक्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
औषधि बनाउने र सेवन गर्ने तरिका जानौ
१. Copper Sulphate नेपालीमा यसलाई नेपाली भाषामा निलोतुथो नामले चिनिन्छ । यो औषधि पशुहरूको पेटको जुका मार्न र अन्य प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ । सफा पानीको बोतलमा थोरै यो औषधि राख्नूहोस् निलो पानी बन्दछ । यसरी बनाएको पानीले दैनिक कुल्ला गर्नुस । धुम्रपान सुर्तीजन्य पदार्थको लतलाई केहि दिनमै छुटाउने छ ।
धूम्रपान सवभन्दा बढी गरिने पाँच देशहरु
← 4G सेवा सञ्चालन भएका जिल्लाहरु र शहरहरु
माघसम्म देशभर 4G सेवा सञ्चालनमा ल्याउने →